Yiziphi izindlela zokuthola i-backlink kuwebhusayithi yami?
Ama-Backlink asebenza njengegazi lokusebenzisa i-website futhi adlale izindima eziyinhloko ku-game search engine optimization. Yingakho ochwepheshe be-SEO betsha imali kwezinye izindlela zokuqhaqha ukuxhumana noma ngabe balandela iziqondiso ze-Google noma cha. Izindlela zokusabalalisa zesizukulwane zihlanganisa ukuthunyelwa kwezivakashi, ukwabelana kwezenhlalo, okuthunyelwe kwebhulogi, imikhankaso yokufinyelela kanye nezixhumanisi ezikhokhelwayo.
Lezi zindlela zokwakha izixhumanisi zingase zibe nomthelela emizamweni yakho ye-SEO noma zibhubhise nhlobo. Iningi labanikazi bewebhusayithi bathatha amagama athi "I-SEO contribution" njengoba imithombo yabo yewebhu ibhalwa ngcono - λεκιθινη αδυνατισμα. Noma kunjalo, iqiniso elidabukisayo ngukuthi ngisho noma wakhela iphrofayili yexhumanisi ephezulu, asikho isiqinisekiso sokuthi uzothola izikhundla eziphezulu zokusekela injini.
Kulesi sihloko, uzothola ezinye izizathu zokuthi izixhumanisi zangaphandle azikwazi ukuthinta ngqo isikhundla sakho sezinga ekhasini lomphumela wosesho.
Kungani ukuthola ama-backlink kusayithi lakho akuhlali njalo?
Uma uthola izixhumanisi zangaphandle kusayithi lakho ngezindlela zobugebengu ze-spammy, ngeke kukuhle kakhulu. Ama-backlink amaningi aphansi kakhulu kusuka kumawebhusayithi wesithathu ngeke akunike amandla ku-SERP. Akuzona nje ukuthi isayithi lakho lizobe lihle kakhulu emiphumeleni ye-TOP ku-Google, kodwa futhi usengozini yokuyilungisa.
Ezinsukwini zethu, abakwa-webmasters baqaphela ingozi evela emuva kwe-spammy backlink njengezixhumanisi zangaphandle ezivela emapulazini okuxhumanisa, amazwana webhulogi we-spammy, okuthunyelwe okukhangisa kanye nezihloko ezifakiwe. Kodwa-ke, abanye abanikazi bewebhu, ikakhulukazi labo abasanda kulesi sigaba, bangawa ngezindlela ezilula zokuthola i-juice yokuxhumanisa emithonjeni yabo yewebhu esikhathini esifushane. Ngincoma ngokuqinile ukugwema noma yiziphi izindlela zobuciko bokuxhumanisa izikhohlisi njengamanje i-Google ihlakaniphile futhi ingakwazi ukubona ngokushesha zonke izihlukumezi zokubusa futhi iwaphulukise. Awusoze wazi ukuthi i-Google izohumusha kanjani lokhu noma leyo backlink. Ngezinye izikhathi ukusesha ibhulogi kuyenqabela kalula izixhumanisi ezivela kumawebhusayithi e-spammy futhi ungabalali ithrafikhi kubo.
Ukuze uthole umphumela obonakalayo kusuka kumkhankaso wokwakha umxhumanisi wakho, kudingeka uqiniseke ukuthi ukwakha izixhumanisi kusuka kumasayithi asemthethweni - afanelekile, afaneleke kumakethe wakho emakethe, athembeke, akhombise kahle futhi ahlanganiswe nezinye iziphathimandla, amasayithi athembekile futhi ahloniphekile.
Enye inkolelo evamile kulolu chungechunge ukuthi ukuthola i-backlink kusuka eminye imithombo ye-intanethi ye-intanethi efana ne-Entrepreneur, i-Forbes noma i-New York Times ingashintsha ngokushesha i-website ku-SERP. Akusebenzi njalo ngaso sonke isikhathi empeleni. Lesi sixhumanisi singasiza isiza sakho ukuba sibe nesilinganiso esiphakeme futhi sikulethe eziningi zethrafikhi eguquliwe noma awunamthelela kumetrikhi wakho nhlobo.
Lokho esingasoze sazi ukuthi ukuxhumanisa kuhle noma kubi ukubonakala kokusesha ngoba i-Google ingayichaza kalula lokhu ayikho i-100% efanele kodwa ithole isixhumanisi njengoba ikhokhwe.
Isimo esifanayo singabonwa ngokuphawula kwebhulogi. Kwezinye izimo, lezi zixhumanisi ziletha inani elihle kwisayithi lakho, kodwa ngezinye izikhathi zibizwa ngokuthi izikhombisi ze-spammy zebhizinisi lakho. Wonke amazwana wakho webhulogi angaveza imiphumela ehlukile kusayithi lakho.